प्रधान मन्त्रिको धाकमा व्यापारी सत्य नारायण कयालले १५ करोड रुपैयाँ विजुलीको पैसा नतिरेको खुलाशा ! - Yatra Daily
Home विषेश खबर प्रधान मन्त्रिको धाकमा व्यापारी सत्य नारायण कयालले १५ करोड रुपैयाँ विजुलीको पैसा...
प्रधान मन्त्रिको धाकमा व्यापारी सत्य नारायण कयालले १५ करोड रुपैयाँ विजुलीको पैसा नतिरेको खुलाशा !
वीरगन्ज २५ कार्तिक । कुलमान घिसिङले नीजि उद्योगधन्दाहरुलाई धराशायी बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका सत्य नारायण कयालले विद्युत प्राधिकरणलाई करोडौँ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । कयाल समुहद्धारा संचालित नारायणी इस्पातले विद्युत उपयोग गरेवापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने करौडौँ रुपैयाँ महशुल नतिरेको पाइएको हो ।
सत्य नारायण कयाल अध्यक्ष रहेको कयाल समुहद्धारा संचालित नारायणी इस्पातले वि.स २०७२ साउनदेखि ०७३ असार महिनासम्मको विद्युत महशुल भुक्तानी नगरेको देखिएको छ । दियोपोस्टलाई प्राप्त विवरणअनुसार २०७२ सालदेखिको एक बर्षको अवधिसम्म उक्त कम्पनीले ५६ लाख ५० हजार २४ युनिट विद्युत खपत गरेको देखिएको छ । सोही बराबर कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिनुपर्ने रकम रु. ८ करोड ४५ लाख ५७ हजार ७ सय ७७ रुपैयाँ ३७ पैसा देखिएको छ ।
नारायणी इस्पातले आधा भन्दा कम रकम ३ करोड दश लाख ६३ हजार मात्र महशुलवापत प्राधिकरणलाई बुझाएको देखिएको छ । सो कम्पनीले ३ करोड ३८ लाख ८४ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ ६८ पैसा प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको विवरणम उल्लेख गरिएको छ ।
सुविधा लिने, महशुल नतिर्ने
पर्साको बिरगंजमा रहेको उक्त कम्पनीले लोडसेडिङको समयमा ट्रंक तथा डेडिकेटेड प्रसारण लाईनमार्फत विद्युत सेवाको सुविधा उपयोग गर्दै आएको थियो । सुविधा लिएपछि महशुल तिर्ने बेलामा भने कयालले विभिन्न बहानाबाजी गर्न थालेका छन् । तीन बर्षअगाडीको महशुल अझैसम्म पनि तिर्न बाँकी रहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाईनमार्फत विद्युत सुविधा लिएवापत आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा सत्यनारायण केयल अध्यक्ष रहेको नारायणी इस्पातको नाममा करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता रकम देखिएको छ । विवरणअनुसार उक्त कम्पनीले सोही आर्थिक बर्षमा १२ करोड ३३ लाख ४८ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ ५१ पैसा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाईनसहित कयाल अध्यक्ष रहेको उक्त कम्पनीले प्राधिकरणलाई जम्मा १५ करोड ७२ लाख ४३ हजार एक सय १२ रुपैयाँ १९ पैसा तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।
महशुल नतिर्न उच्च अहोदाका नेताहरुसंग गुहार !
विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको करिब १० अर्ब शुल्क तिर्न व्यवसायीहरुले आनाकानी गर्दै आएका छन् । विभिन्न अदालतमा मुद्धा दायर गरेको भएतापनि अदालतले व्यापारीहरुको मुद्धा नै खारेज गरिदिएको छ । मुद्धा खारेज भएपछि व्यवसायीहरु हाइ प्रोफाइल नेता तथा मन्त्रीहरुको शरणमा पुग्ने र महशुल कटौती गर्न अनेक प्रकारका लोभ र अनुरोध गर्ने गरेको पाइएको छ ।
आफुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकट पात्र बताउँदै सत्यनारायण कयालले प्रधानमन्त्रीकै फोर्स लगाएर आफुले संचालन गरेको उद्योगमा निकै कम बिलिङ गर्न लगाएको समेत स्रोतको दावि छ ।
घिसिङ बिरुद्ध सक्रिय
कयालले पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहेका कुलमान घिसिङमाथि विभिन्न आरोप लगाउने र आफु पन्छिन खोज्ने रवैया देखाउँदै आइरहेका छन् । केही दिनअघि राष्ट्रिय संचारमाध्यममा नै कयालले खुल्लमखुल्ला घिसिङमाथि उद्योगधन्दा धराशायी बनाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
करोडौँ रुपैयाँ बिल तिर्नुपरे उद्योगधन्दाहरु धराशायी बन्ने बताउँदै कयालले प्राधिकरणका प्रमुख प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको रवैयाकै कारण उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए ।
घिसिङले भने विद्युत सेवा लिएवापत प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने रकम मात्र उठाउन लागेको बताएका छन् । ‘लोडसेडिङको बेला डेडिकेटेड प्रसारण लाईनको सुविधा लिएका उद्योगीबाट प्रिमियम शुल्क उठाउन लागेका हौँ’, उनले भनेका छन्, ‘संचालक समिति बैठकले एकैपटकभन्दा पनि किस्ता किस्तामा बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरेको छ ।’ diyopost.com बाट
Previous articleप्रधान मन्त्रिको धाकमा व्यापारी सत्य नारायण कयालले १५ करोड रुपैयाँ विजुलीको पैसा नतिरेको खुलाशा !
Next articleरक्सोल भन्सार बन्द गर्न भारतीयको दबाब